သူရဲ့အချစ်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပရိတ်သတ်တွေကို ထုတ်ဖော်ပြောပြလာခဲ့တဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင်….. – Shwewiki.com
May 2, 2021 By t hs Celebrity
ပရိတျသတျကွီးရေ…. ဥက်ကာမငျးမောငျဟာဆိုရငျ ပရိတျသတျတှရေဲ့အားပေးခဈြခငျမှုကိုအပွညျ့အဝရရှိထားတာဖွဈပွီး လကျရှိမှာတော့ သူဟာအမရေိကနျမှာနထေိုငျနတောပဲဖွဈပါတယျနျော။ဥက်ကာမငျးမောငျကတော့ တဈခါတဈလမှောဆိုရငျ ကွမနျမာပွညျသို့ပွနျလာပွီးအနုပညာအလုပျတှလေုပျကိုငျလရှေိ့ပါတယျပရိတျသတျကွီးရေ။ဥက်ကာမငျးမောငျကို ခဈြခငျအားပေးတဲ့ပရိသတျတှကေတော့ အမရေိကနျမှာနထေိုငျနလေညျး အားပေးခဈြခငျနကွေဆဲပဲဖွဈပါတယျ။သူဟာဆိုရငျ မျောဒယျတဈယောကျအဖွဈရပျတညျနတေဲ့ အရမျးကိုမိမိုကျလှနျးတဲ့ခန်ဓာကိုယျကိုပိုငျဆိုငျထားပွီး တောငျ့တငျးတဲ့ဗလတှကေလညျညျးပရိတျသတျတှကေိုကွှစေနေိုငျလောကျတဲ့အပွငျ ခြောမောခနျ့ညားတဲ့ရုပျရညျကိုပါပိုငျဆိုငျထားတဲ့သူတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။
ဥက်ကာမငျးမောငျဟာဆိုရငျ မိဘအပျေါသိတတျလိမ်မာပွီး မိဘကိုဂရုစိုကျစောငျ့ရှောကျပေးတဲ့သားလိမ်မာတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျနျော။သူကတော့ အခုလကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့နိုငျငံရေးအခွအေနမှောဆိုရငျလညျး အဝေးတဈနရောကနေ ပွညျသူလူထုနဲ့အတူ အမှနျတရားဘကျကနရေပျတညျနတောပဲဖွဈပါတယျ။အဲ့ဒီလိုနိုငျငံရေးအခွအေနတှေကေေိုအာရုံစိုကျနတေဲ့ ဥက်ကာမငျးမောငျတဈယောကျ အခဈြရေးမှာတော့ Single ဖွဈနတောဆိုရငျ (၆)လတောငျရှိသှားပါပွီနျော..။ကိုယျ့နျိုငျငံရဲ့အရေးရယျ အလုပျမအားတာတှရေယျကွောငျ့ အခဈြရေးဘကျကို အလှညျ့နိုငျတဲ့ ဥက်ကာမငျးမောငျတဈယောကျ ဒီကနမှေ့ာတော့ သူ့ရဲ့နှလုံးသားရေးရာကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး ပရိတျသတျတှကေို ရငျဖှငျ့ပွောပွလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော..။
အဲ့ဒါကတော့”ဘာလိုလိုနဲ့ Single ဖွဈတာ ၆ လ​တောငျရှိသှားပွီ..ကိုယျ့နိုငျငံအ​ရေး​တှနေဲ့ အလုပျမအားတာနဲ့ စိတျက Dating life ဘကျကို စိတျမပါ​လို့ ဘယျသူနဲ့မှ မ date ပဲ တဈ​ယောကျထဲ​အေး​ဆေး​နတော ဘဝက အရမျး​အေးခမျြးတာပဲ.. လှတျလပျခွငျးအပွညျ့.. ​ရညျးစား​ဟောငျးကို လဲ ပွနျမလိုခငျြဘူး.. အသဈလဲမထားခငျြဘူး… သွျော ငါ ဒီတခါ​တော့ Single ဘဝနဲ့ အကွာကွီး​နဦေးမယျ​ပေါ့… အာ့လို ဆုံးဖွတျထားတာ.. သို့​ပမေယျ့လဲ ​လောကကွီးမှာ ကံကွုံလာရငျ ကိုယျက မရှာ​​သျောလဲ ကိုယျ့​ရှေ့​မှောကျ ရောကျ​ရောကျလာတတျတယျတဲ့.. အမှနျပဲ.. ဟိဟိ.. စ​တှတေ့ာ ရကျပိုငျးပဲရှိ​သေးတယျ.. တညျငွိမျ​နတေဲ့ ကနျ​ရပွေငျကို ခဲနဲ့ လာ​ပေါကျတာလား အနူမွှူဗုံးလာကွဲတာလား​တော့ မသိ.. စိတျက​တော့ ယှစိယှစိဂယကျတသိနျး ထ​နပွေီ .. ဘာ​တှဆေကျဖွဈမလဲ​​တော့ မသိ..ရငျ​တှခေုနျ.. အား 😁🤣😂😜” ဆိုပွီး သူရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှာ ခဈြစဖှယျရေးသားထားတာပဲဖွဈပါတယျနျော။သူ့ကိုခဈြတဲ့ပရိတျသတျတှကေလညျး တကယျခဈြတဲ့သူနဲ့ဆုံစညျးပါစဆေိုပွီးဆုတောငျထားတာတှကေိုလညျး တှမွေ့ငျရပါသေးတယျ ပရိတျသတျကွီးရေ….။ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိတျသတျတဈယောကျခငျြးစီတိုငျးကို ကြေးဇူးအထူးပဲတငျရှိပါတယျနျော…။
Source ; Oakker Min Maung’s Facebook Acc
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…. ဥက္ကာမင်းမောင်ဟာဆိုရင် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားတာဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ သူဟာအမေရိကန်မှာနေထိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဥက္ကာမင်းမောင်ကတော့ တစ်ခါတစ်လေမှာဆိုရင် ကြမန်မာပြည်သို့ပြန်လာပြီးအနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်လေ့ရှိပါတယ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ။ဥက္ကာမင်းမောင်ကို ချစ်ခင်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ အမေရိကန်မှာနေထိုင်နေလည်း အားပေးချစ်ခင်နေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဆိုရင် မော်ဒယ်တစ်ယောက်အဖြစ်ရပ်တည်နေတဲ့ အရမ်းကိုမိမိုက်လွန်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး တောင့်တင်းတဲ့ဗလတွေကလည်ည်းပရိတ်သတ်တွေကိုကြွေစေနိုင်လောက်တဲ့အပြင် ချောမောခန့်ညားတဲ့ရုပ်ရည်ကိုပါပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဥက္ကာမင်းမောင်ဟာဆိုရင် မိဘအပေါ်သိတတ်လိမ္မာပြီး မိဘကိုဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့သားလိမ္မာတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။သူကတော့ အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေမှာဆိုရင်လည်း အဝေးတစ်နေရာကနေ ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ အမှန်တရားဘက်ကနေရပ်တည်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကေိုအာရုံစိုက်နေတဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင်တစ်ယောက် အချစ်ရေးမှာတော့ Single ဖြစ်နေတာဆိုရင် (၆)လတောင်ရှိသွားပါပြီနော်..။ကိုယ့်နိ်ုင်ငံရဲ့အရေးရယ် အလုပ်မအားတာတွေရယ်ကြောင့် အချစ်ရေးဘက်ကို အလှည့်နိုင်တဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင်တစ်ယောက် ဒီကနေ့မှာတော့ သူ့ရဲ့နှလုံးသားရေးရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပရိတ်သတ်တွေကို ရင်ဖွင့်ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..။
အဲ့ဒါကတော့”ဘာလိုလိုနဲ့ Single ဖြစ်တာ ၆ လ​တောင်ရှိသွားပြီ..ကိုယ့်နိုင်ငံအ​ရေး​တွေနဲ့ အလုပ်မအားတာနဲ့ စိတ်က Dating life ဘက်ကို စိတ်မပါ​လို့ ဘယ်သူနဲ့မှ မ date ပဲ တစ်​ယောက်ထဲ​အေး​ဆေး​နေတာ ဘဝက အရမ်း​အေးချမ်းတာပဲ.. လွတ်လပ်ခြင်းအပြည့်.. ​ရည်းစား​ဟောင်းကို လဲ ပြန်မလိုချင်ဘူး.. အသစ်လဲမထားချင်ဘူး… သြော် ငါ ဒီတခါ​တော့ Single ဘဝနဲ့ အကြာကြီး​နေဦးမယ်​ပေါ့… အာ့လို ဆုံးဖြတ်ထားတာ.. သို့​ပေမယ့်လဲ ​လောကကြီးမှာ ကံကြုံလာရင် ကိုယ်က မရှာ​​သော်လဲ ကိုယ့်​ရှေ့​မှောက် ရောက်​ရောက်လာတတ်တယ်တဲ့.. အမှန်ပဲ.. ဟိဟိ.. စ​တွေ့တာ ရက်ပိုင်းပဲရှိ​သေးတယ်.. တည်ငြိမ်​နေတဲ့ ကန်​ရေပြင်ကို ခဲနဲ့ လာ​ပေါက်တာလား အနူမြှူဗုံးလာကြဲတာလား​တော့ မသိ.. စိတ်က​တော့ ယွစိယွစိဂယက်တသိန်း ထ​နေပြီ .. ဘာ​တွေဆက်ဖြစ်မလဲ​​တော့ မသိ..ရင်​တွေခုန်.. အား 😁🤣😂😜” ဆိုပြီး သူရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ ချစ်စဖွယ်ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။သူ့ကိုချစ်တဲ့ပရိတ်သတ်တွေကလည်း တကယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ဆုံစည်းပါစေဆိုပြီးဆုတောင်ထားတာတွေကိုလည်း တွေ့မြင်ရပါသေးတယ် ပရိတ်သတ်ကြီးရေ….။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နော်…။
မိခင်ခင်ဖြဟ်သူရဲ့မွေးနေ့အလှူအဖြစ် ကျိူမရောဆရာတော်ကြီးထံသွားရောက်ကာ ဆွမ်း၊ သင်္ကန်းနဲ့ဝတ္ထုငွေများကပ်လှူကပ်လှူကာကုသိုလ်ပြုခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ…